Tezos စျေး - အွန်လိုင်း XTZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Tezos (XTZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Tezos (XTZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Tezos ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 221 041 540.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Tezos တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Tezos များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TezosXTZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$3.41TezosXTZ သို့ ယူရိုEUR€2.89TezosXTZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£2.61TezosXTZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.3.11TezosXTZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr30.75TezosXTZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.21.53TezosXTZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč76.04TezosXTZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł12.75TezosXTZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$4.56TezosXTZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$4.76TezosXTZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$76.25TezosXTZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$26.4TezosXTZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$18.52TezosXTZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹255.54TezosXTZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.575.22TezosXTZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$4.68TezosXTZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$5.16TezosXTZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿106.34TezosXTZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥23.73TezosXTZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥360.83TezosXTZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩4050.32TezosXTZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1317.63TezosXTZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽251.07TezosXTZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴94.43
TezosXTZ သို့ BitcoinBTC0.000291 TezosXTZ သို့ EthereumETH0.00863 TezosXTZ သို့ LitecoinLTC0.0588 TezosXTZ သို့ DigitalCashDASH0.0349 TezosXTZ သို့ MoneroXMR0.0365 TezosXTZ သို့ NxtNXT236.72 TezosXTZ သို့ Ethereum ClassicETC0.49 TezosXTZ သို့ DogecoinDOGE970.47 TezosXTZ သို့ ZCashZEC0.0358 TezosXTZ သို့ BitsharesBTS129.94 TezosXTZ သို့ DigiByteDGB117.27 TezosXTZ သို့ RippleXRP11.54 TezosXTZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.116 TezosXTZ သို့ PeerCoinPPC11.36 TezosXTZ သို့ CraigsCoinCRAIG1530.76 TezosXTZ သို့ BitstakeXBS143.39 TezosXTZ သို့ PayCoinXPY58.65 TezosXTZ သို့ ProsperCoinPRC421.9 TezosXTZ သို့ YbCoinYBC0.00181 TezosXTZ သို့ DarkKushDANK1077.18 TezosXTZ သို့ GiveCoinGIVE7270.74 TezosXTZ သို့ KoboCoinKOBO753.64 TezosXTZ သို့ DarkTokenDT3.14 TezosXTZ သို့ CETUS CoinCETI9694.75